ပင်မစာမျက်နှာ / ဘ‌‌လော့ခ် / မီးဖိုချောင် Faucet ၏အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ကဘာလဲ?
2020 / 12 / 03 အမြိုးခှဲခွားခွငျးဘ‌‌လော့ခ် 5662 0
Amazon မှနာမည်ကြီးပြီးစျေးသိပ်မကြီးသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သော WOWOW၊ Ufaucet, KINGO HOME ။
အချို့သောလူကြိုက်များသောမီးဖိုချောင် faucets: Moen, Delta, American Standard, Kohler, Kraus
စျေးကွက်တွင် faucets များသည်ဒေါ်လာအနည်းငယ်မှဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာအထိစျေးနှုန်းများအထိတက်သည်။ သငျသညျတင်းကျပ်စွာဘတ်ဂျက်အပေါ် faucet ရှာနေလျှင်, ငါ Home Depot, အမေဇုံသို့မဟုတ်အခြားစျေးဝယ်က်ဘ်ဆိုက်များမှအွန်လိုင်းဝယ်ယူရန်အကြံပြုလိမ့်မယ်။ အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ ၀ ယ်သူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုသင်ဖတ်ရှု။ ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီအခြားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ သင့်ရွေးချယ်မှုအားပြုပြင်ရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် faucet ၀ ယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားရမည့်အချို့အချက်များမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Faucet ၏ပစ္စည်း
faucet အလောင်းများ၏အဓိကပစ္စည်းများမှာသံ၊ ဇင့်သတ္တုစပ်၊ ကြေးဝါသတ္တုစပ်၊ သံမဏိနှင့်ပလပ်စတစ်များဖြစ်သည်။ သံသတ္တုနှင့်သွပ်သတ္တုစပ်များသည်စျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်းရေရှည်အသုံးပြုရန်မသင့်ပါ။ ကြေးဝါသတ္တုစပ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ကြေးနီသတ္တုစပ်သည်အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်နိုင်သည်၊ ချေးသည်၊ အက်ဆစ်နှင့်အယ်ကာလီကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။
faucets အားလုံးမှာ aerators မရှိကြပါဘူး။ လေကြောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရေမှုတ်ထုတ်ခြင်းမရှိသောရေစီးကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြောင့်သောဖိအားစီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါ aerator faucet မှတဆင့်ရေစီးဆင်းမှုကိုကန့်သတ်သောကြောင့်, aerator မပါဘဲအတူတူစီးဆင်းမှုအချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရေနည်းအသုံးပြုသည်။ ရေနည်းသောကြောင့်ရေနည်းသောကြောင့်အပူလျော့နည်းသည်။ ဝေဟင်မှရေမှအစိုင်အခဲအမှုန်များကိုစစ်ထုတ်သည့်အရာလည်းရှိသည်။
အဆိုပါအဆို့ရှင်ရေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်သော faucet ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာအဆို့ရှင်အတော်များများရှိပြီး၎င်းတို့ကိုအချို့သောအမျိုးအစားများခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ဘုံအမျိုးအစားများမှာ roller valves များ၊ ကြွေပြားများနှင့် stainless steel valves များဖြစ်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးအဆို့ရှင်အမျိုးအစားသည်ကြွေထည်အဆို့ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းမှာကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ပြီးသက်တမ်းရှည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြွေအဆို့ရှင်များကိုသုံးသောရေပိုက်များသည်မကြာခဏအသုံးပြုသောအခါယိုစိမ့်မှုနည်းသည်။
Faucets များကိုများသောအားဖြင့်နီကယ်ရော chrome ချောဖြင့်ပါရရှိနိုင်သည်။ သံမဏိ faucets များ၏မျက်နှာပြင်ကို electroplating မပါဘဲပွတ်တိုက်နိုင်သည်။ electroplating ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအလှဆင်နှင့်သံချေးကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ဆောင်ချက်များသည်။ faucet ကောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်မျက်နှာပြင်၏အရည်အသွေးကိုဂရုပြုရန်လိုသည်။ အရောင်ကောင်းခြင်း၊ အပေါက်များသို့မဟုတ်အရည်ကြည်ဖုများမပါရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့ကောင်းမွန်သည်။ သင်သည်သင်၏လက်ချောင်းဖြင့်မျက်နှာပြင်ကိုနှိပ်သောအခါလက်ဗွေများအလျင်အမြန်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချောက faucet ကိုသံချေးကနေကာကွယ်ပေးလို့ပဲ။ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်၎င်း၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်။
အရင်းအမြစ်လင့်ခ်: မီးဖိုချောင် faucets
ရှေ့သို့ :: မီးဖိုချောင် faucets အစားထိုးဖို့ဘယ်လို? နောက်တစ်ခု: ဘယ်မီးဖိုချောင်ထဲမှရေကန်ကအကောင်းဆုံးလဲ။
သင့်ရေချိုးခန်းကို ပြီးပြည့်စုံစွာဖန်တီးရန် မရှိမဖြစ် ကြွေပြားများစာရင်း
2022 / 01 / 29 219
သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းဝယ်ယူမှုတွင် အဓိကကျသော ချို့ယွင်းချက် ရှစ်ခုကို သင်ရော့...
2022 / 01 / 27 709
တူညီသော5M² ရေချိုးခန်း၊ သို့သော် ဤဒီဇိုင်းသည် ၎င်းကို နှစ်ဆပိုကြီးစေပြီး ဤနေရာတွင်...
2022 / 01 / 27 630
အကောင်းဆုံးမီးဖိုချောင်သုံး Faucets 2021 - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းလမ်းညွှန်
2022 / 01 / 25 1148
ကြမ်းပြင်တစ်ဝိုက်ရှိ ရေမြောင်းတစ်ဝိုက်တွင် ကြွေပြားခင်းခြင်းအတွက် အဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံးကား အဘယ်နည်း။
2022 / 01 / 23 1364
ရေချိုးခန်းကို ဦးစွာ ကြွေပြားခင်းထားသလား ဒါမှမဟုတ် အိမ်သာကို အရင် တပ်ဆင်ပါလား။
2022 / 01 / 23 1481